Ọ bụ ugbu a dị nnọọ mfe na-eme ka n'aka na Samsung Kies na PC na jikọọ na Samsung Galaxy S4 site n'ụlọ Wi-Fi na netwọk. The zuru ezu usoro e kọwara dị ka n'okpuru:
1. The PC na Mobile ekwentị ga-jikọọ na Home Wi-Fi.
2. The Kies ga-arụnyere na PC
3. User kwesịkwara ime ka n'aka na Kies tree Nnọchiteanya Ukwu na-agba ọsọ na PC. Maka Windows 7 ọ ga-kwupụtara site na ịpị Ctrl + Alt + Del igodo na mgbe ahụ na-ahọpụta ndị ọrụ njikwa nhọrọ. N'okpuru Filiks onye ọrụ ga-enwe ike ịhụ ihe omume na otu aha. N'ihi na Windows 8 onye ọrụ nwere ike ịhụ ihe omume ahụ site iso ụzọ ọrụ njikwa> Filiks. Nkwenye a ga-eme site n'ịhụ na usoro ihe omume KiesTrayAgetnt.exe na-agba ọsọ n'okpuru Filiks mmanya ma ọ bụrụ na nke a adịghị egosi mgbe ahụ PC bụ na-restarted na gbalịrị ọzọ.
Mwube PC maka Kies n'elu Wi-Fi
The Filiks n'ihi na ma windows 7 na 8 e tụlere ka n'okpuru na onye ọrụ nwere ike họrọ ndị dị ka kwa ọchịchọ ha:
1. firing elu netwọk chọpụtara na PC na-amalite
a. On mmeri 7 ụzọ a ga-agbaso bụ akara panel> netwọk na internet> Network na-ekere òkè Center> Gbanwee elu nkekọrịta ntọala:
b. The Wi-Fi netwọk ka nke PC e jikọọ kwesịrị inwe Gbanwuo Network chọpụtara họrọ. Ọ na-adabere onye ọrụ ntọlite ​​na ntọala nke Wi-Fi:
2. Internet nkekọrịta nkwarụ
a. Ebe a ụzọ na-a ga-agbaso bụ akara panel> netwọk na nkekọrịta center> mgbanwe nkwụnye Ntọala> nri na ịpị Wi-Fi nkwụnye na-ahọpụta ndị Njirimara:
b. Peeji na-esonụ na Pop elu onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ịdị na taabụ a pịrị na nhọrọ nke "Ka ndị ọzọ netwọk ndị ọrụ jikọọ site na nke a na kọmputa" internet njikọ "bụ ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ na-enyocha:
3. Firewall wezụga
a. The ụzọ na nke a nke na bụ a ga-agbaso bụ akara panel> System na nche> windows firewall> ekwe na ngwa ma ọ bụ atụmatụ site na windows firewall.
b. The mgbanwe ọnọdụ button a na-ahụ na-kụrụ na wireless obere ngwaọrụ ndị na-anya nke na-emi odude na njedebe. The Home / Irè na ma ọ bụ onwe checkbox bụ na-nne Mmetụta iji jide n'aka na Kies ngwa nwere ike ikwurịta okwu site na firewall. The OK bọtịnụ bụ mgbe ahụ na-enwe kwụsị.
4. Windows ọrụ
a. The ụzọ a ga-agbaso bụ akara panel> usoro na Nche> Nlekọta Ngwaọrụ> Ọrụ. The ọrụ aha dị ka SSDP chọpụtara na UPnP ngwaọrụ usu ga-agba ọsọ. Ọ bụrụ na otu anaghị eme eme onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na ọrụ bụ nri clicked na malitere.
b. The njikọ Ịntanetị nkekọrịta ọrụ bụ-nkwarụ ma ọ bụrụ na-agba ọsọ dị ka a nzọụkwụ nke abụọ nke usoro a.
1. Network chọpụtara enablement on PC
a. The ụzọ bụ otu ihe ahụ dị ka nke windows 7 ie akara panel> netwọk na internet> netwọk nkekọrịta center> ịgbanwe Advanced Ịkekọrịta Ntọala:
b. The Wi-Fi ka nke PC e jikọọ kwesịrị inwe netwọk chọpụtara mode tụgharịa na dabere n'elu ntọala nke onye ọrụ:
a. Control Panel> netwọk na nkekọrịta center> ịgbanwe nkwụnye ntọala
b. The Wi-Fi nkwụnye bụ na-nri pịrị iji jide n'aka na Njirimara na-ahọrọ. On ọhụrụ window ịdị na taabụ bụ mgbe ahụ na-pịrị na nhọrọ nke "Ka ndị ọzọ netwọk ndị ọrụ jikọọ site na nke a na kọmputa" bụ-nkwarụ.
3. Firewall wezụga ntọala
a. Control panel> usoro na Nche> Windows firewall> ekwe na ngwa ma ọ bụ atụmatụ site na windows firewall ụzọ a ga-nakweere:
b. Ọzọ mgbanwe ntọala taabụ bụ na-pịrị na onye ọrụ kwesịrị anya nri na ala ebe wireless obere ngwaọrụ na-depụtara. The igbe n'okpuru isiokwu nke onwe a ga-enyocha:
a. Control panel> usoro na Nche> Nlekọta Ngwaọrụ> ọrụ. Ọrụ nke SSDP chọpụtara na UPnP Ngwaọrụ Host ọrụ ga-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ikpe bụ ha na-emegide mgbe ahụ ọrụ ndị a kwesịrị nri clicked na malitere. The njikọ Ịntanetị nkekọrịta bụkwa na-nkwarụ ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ:
Ijikọ S4 ka Kies site Wi-Fi
a. Onye ọrụ kwesịrị ileta n'ụlọ> Ntọala> njikọ na mgbe ahụ enweta nhọrọ nke Kies site Wi-Fi. Ọ bụrụ na a ịdọ aka ná ntị ozi kpaliri onye ọrụ ahụ kwesịrị ijide n'aka na OK bọtịnụ na-kụrụ na nke a. The Kies site Wi-Fi ga-amalite ike iṅomi maka na kọmputa na ọ bụrụ na ọ anaghị eme eme na-akpaghị aka onye ọrụ nwere ike see nhọrọ nke iṅomi ngwaọrụ na-amalite usoro. Ndị kasị mkpa na-arụtụ aka na-achọpụta bụ na n'oge scanning adọ ekwentị bụ mgbe a ga-jikọọ na PC site eriri USB. Ozugbo PC e chọpụtara aha ga-tapped iji jide n'aka na njikọ usoro anabata. The ngafe isi site usoro ihe omume a ga-banyere ndị PC guzosie njikọ. Ọ bụ a onetime usoro na bụ a ga-agbaso:
b. The usoro e okokụre kpamkpam na ugbu a onye ọrụ kwesịrị ichere ka ngwaọrụ abụọ jikọọ na onye ọ bụla ọzọ:
Nyefee na faịlụ site Samsung ka PC eji Wondershare MobileGo site Wi-Fi
Wondershare MobileGo bụ otu nke kasị mma na ngwaahịa na e kpọmkwem mepụtara n'ihi na ndị niile mmadụ na-eche Kies dị ka a ahịhịa ma ọ bụ a mpempe-ekpofu na-adị nnọọ kpọmkwem ọtụtụ ndị mmadụ na-eche otú ahụ. Ọ bụ n'ihi na eziokwu na ndị wụnye Kies na mgbe ahụ ọ na-amalite na-enye nsogbu karịsịa na Mac ọbụna ma ọ bụrụ na ọ e uninstalled. E nwere abụọ nsụgharị na-akwado site na usoro ihe omume onye mbụ bụ njikọ site eriri USB na onye nke ọzọ bụ ejikọta Kies n'elu Wi-Fi. Nke ikpeazụ a ga-atụle ebe a iji nweta nke mkpebi maka ndị na-na-achọ enyemaka na nke a:
E nwere ụfọdụ atụmatụ:
Mobile ọdịnaya management
N'aga n'ihu isi atụmatụ agbakwunyere
Ngwaọrụ mirroring na kọmputa
1. The PC na ngwaọrụ kwesịrị jikọọ otu netwọk Wi-Fi dị ka ọ bụ otu n'ime ndị kasị mkpa nzọụkwụ na nke a.
2. Site Samsung Ngwaọrụ onye ọrụ kwesịrị iji nweta a MobileGo ngwa iji jide n'aka na ihe ngwa faịlụ ebudatara na arụnyere na ngwaọrụ.
3. Gbaa Wondershare Mobilego na PC.
4. The ọrụ dịkwa mkpa iji jide n'aka na-eji ngwa arụnyere na ekwentị na-tapped imeghe na button bụ-mbadamba. The QR koodu na-egosi na PC ihuenyo bụ na-scanned site na ịpị OK bọtịnụ. Ngwaọrụ ugbu a na e jikọọ.
5. The ngwaọrụ a ga-emere na isi window ozugbo ọ e jikọọ:
3 ụzọ ndabere Samsung Galaxy S4 / s3
> Resource> Samsung> Nyefee faịlụ site Samsung ka PC Iji Kies site WiFi